Filtrer les éléments par date : vendredi, 29 mai 2020
vendredi, 29 mai 2020 12:53
Moramanga: Nianjera avy eny ambony Cyclo-pousse dia maty voahitsaky ny kamiao ilay ramatoa avy naka « pension »
Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona teo amin'ny Camp des Mariés Moramanga ny 27 mey tokony ho tamin'ny 10ora sy fahefana. Ramatoa lehibe iray avy naka vola fisotroan-dronono nandeha posy bisikileta na « Cyclo-pousse » no nianjera ka tafasitrika tao ambanin'ny fiarabe iray mandalo, ka voahosin’ny kodiarana aoriana ny lohany ary maty tsy tra-drano.
Raha ny tombana dia mety nitsako « frein » tampoka ilay posy bisikileta ka tsy nahatazona ilay ramatoa ary tafavoaka tety ivelany, nianjera tany ambanin'ilay kamiao. Efa nandray ny andraikiny ireo tompon'andraikitra rehetra.
vendredi, 29 mai 2020 12:51
FJKM Merimanjaka Fiderana: Tantara mitohy ny fanendrena Mpitandrina
Tantara mitohy ny fanendrena Mpitandrina, tsy araka ny tokony ho izy, ataon’ny Synodam-paritany Atsimo etsy amin’ny FJKM Merimanjaka Fiderana. Ny maro an’isa, ny Vahoakan’Andriamanitra manontolo ao amin’ity fitandremana ity mihitsy no tsy manaiky ny fanendrena ny Pastera Rakotoarison Zouzou, hitandrina ao noho ny fanapahan-kevitra amboletra sy tsy araky ny fitsipika sy foto-dalàna ao amin’ny FJKM.
Ny FJKM Merimanjaka Fiderana, rahateo efa teo ampiomanana, ny fandraisan-tanana ho Mpitandrina raikitra an’i Pastera Rafanomezantsoa Pascal, izay efa herintaona no tao.
Ny 7 may 2020 teo no daty nomen’ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo, tokony nametrahana ny Pastera Rakotoarison Zouzou. Tsy tontosa izany, noho ny fanoherana mivaivay nataon’ny mpino rehetra tao amin’ity fiangonana ity. Mbola naneho ny firaisankinany, mitsipaka izao fanapahan-kevitry ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo izao ny mpino tao amin’ny FJKM Merimanjaka Fiderana, tamin’ny alahady teo.
vendredi, 29 mai 2020 09:48
Covid-19: Tsy nisy vesatra nanenjehina an'i Pr Ralandison Stéphan
Niteraka samboaravoara teto Toamasina ny raharaha Pr Ralandison Stéphan, Sojaben’ny Fakioltean’ny sampana fitsaboana Toamasina, izay nanadihadiana azy mikasika ny fahafatesan'ilay mpitsabo tao amin'ny Hopitaly Manarapenitra.
vendredi, 29 mai 2020 09:21
Sambava: Mifanolana ny mpivarotra ao an-tsen’Ambodisatrana sy ny Kaominina
Nitokona ireo mpivaro-trondro etsy amin'ny tsena Ambodisatrana-Sambava raha vao nanaovan'ny Kaominina fanambarana fa hoesorina eo amin'ny toerana ka hafindra ao amin’ny tsena mitafo.
Nilaza ireo mpivarotra fa tsy mety amin'izy ireo izany famindran-toerana ao amin’ny tsena mitafo izany satria tsentsina avokoa ny lakandrano nefa mampiasa rano betsaka izy ireo, faharoa ity tany misy azy ireo amin’izao dia tany nangatahana tamin’ny sampan-draharahan’ny tontolo iainana hatramin’ny taona 1996 izay nahazo alalana ary niafara tamin’ny fanomezana ny hanaovana tsena iray, kanjo izao nanambara ny Benin’ny Tanàna indray fa misy tompony ny tany ka ho tonga handrefy izany ka niteraka ity savorovoroity.
vendredi, 29 mai 2020 09:10
Betafo-Vakinankaratra: Manomboka miaina fiovana ny Vahoaka
Telo volana nitantanana ny tanànan’i Betafo izao i Randriatahinamalala Livasoa. Ben’ny Tanàna vaovao ity farany. Fanambiny ny hanao tatitra ho an’ny Vahoaka isaky ny telo volana satria “manan-jo hahalala ny fitantanana ny tanànany ny Vahoaka”, hoy izy.
Na mbola ao anatin’ny fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana aza, izay nampihena ny fahafahana manao zavatra, dia azo tsapain-tanana ny asa vita tao anatin’izay telo volana mahery nandraisana ny fitantanana ny Kaominina ambonivohitra Betafo, Faritra Vakinankaratra izay, hoy Randriatahinamalala Livasoa.
vendredi, 29 mai 2020 08:35
Ambatondrazaka: Voafonja efa-dahy nihanika tamboho dia nitsoaka
Feom-basy no nanaitra ny manodidina ny fonja ny alarobia 27 may mitatao vovona mahery teo. Voafonja efa-dahy no voalaza fa tafatsoaka rehefa avy nihanika tamboho.
Nifarimbona nanenjika ireto voafonja ireto ny mpandraharahan’ny fonja sy ny Fokonolona teo amin'ny manodidina. Tsy lasa lavitra dia voasambotra avokoa izy efa-dahy. Naratra voatifitra teo amin’ny tongony ny iray rehefa nikiry hitsoaka na efa nanao tifi-danitra fampitandremana azy ireo aza ny mpitandro filaminana.
vendredi, 29 mai 2020 08:24
Covid-19 Toamasina: Tonga ireo fitaovana sy fanafody fanampiny
Tsy mitsaha-miakatra ny isan'ny mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 aty Toamasina, ka hiadiana amin'izay, araka ny fampanantenan'ny Filoha Andry Nirina RAJOELINA tamin'ny fandalovany farany teto an-drenivohitra Betsimisaraka dia ilaina ny fampitaovana mahampy.
Ankoatr'ireo fitaovana sy fanafody tonga hatramin'izay, dia nisy ny sidina TSARADIA Cargo ny Alakamisy 28 may folakandro, nitefa tao Ambalamanasy, nitondra fitaovana maro:
vendredi, 29 mai 2020 07:50
DRENETP Matsiatra Ambony: Mpampianatra FRAM miisa 350 noraisina ho mpiasam-panjakana raikitra
Notanterahina tao amin’ny Lapan’ny Faritra Matsiatra Ambony ny alakamisy 28 may 2020 ny fanolorana ny Contrat de Travail, handraisana ho mpiasam-panjakana raikitra ireo Mpampianatra FRAM miisa 350 eto anivon’ny Faritra, ho fanalana fahasahiranana ireo ray aman-drenin’ny Mpianatra, ary indrindra ho fitsinjovana ny fanatsarana ny tontolon’ny fanabeazana.
vendredi, 29 mai 2020 07:45
29 mai: Journée Internationale des casques bleus.